Waddada Loo Marayo Maamul Gobaleedka Mudug iyo Galguduud | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Waddada Loo Marayo Maamul Gobaleedka Mudug iyo Galguduud
Waddada Loo Marayo Maamul Gobaleedka Mudug iyo Galguduud
Inkasta oo muran siyaasadeed iyo qaylo dhaan ay weli ka aloosantahay habka maamulka loogu dhisayo gobollada dhexe haddana waxaa muuqata in aan cidna loo hakineyn oo howshu ay u socon doonto sidii loo qorsheeyey sida uu noo xaqiijiyey Cabdullahi Cabdi oo ah madaxa guddiga warfaafinta ee guddiga farsamada maamul u dhisidda goboladaasi.
Waxaa uu Cabdullahi intaasi raaciyey in laqorsheeyey in shirku uu socdo 45 maalmood oo kaliya hasayeeshee ay dhici karto in ugu badnaan 2 bilood ladhameystiro iyada oo laga bilaabayo 2 bishaan May. Afartan oday dhaqameed ayaa laqoondeeyey in ay shirka bud dhig u noqdaan oo ay soo xulaan ergooyin 400 oo kaliya ah. Waxaa uu tilmaamay Cabdullaahi Cabdi , in ilaa iyo hadda la xareeyey 28 oday dhaqameed intii kalana lasugayo.
Shaqada laga doonayo odayaasha dhaqanka ayaa waxaa ay tahay in ay 11ka beelood ee gobollada dhexe dega u qaybiyaan 400 ee ergooyinka iyo 65 xubnaha Baarlamaanka ah.
Kontan xubnood oo kamida Ergooyinka ayaa waxaa saami ahaan loo siiyey Ahllu sunna iyaga oo ku qaybinaya qaab beeleedka 4.5 ka
Haddaba waa maxay shaqada laga doonayo Ergooyinka?
Sida aannu ka soo xiganey ilo ku dhow dhow guddiga farsamada, waxaa ay noqoneysa howsha ergooyinku, ansixinta dastuurka dowlad gobaleedka, doorashada caasimadda iyo calanka maamulku yeelan doono.
Dhibaatooyin badan ayaa hortaagan howsha ballaaran ee Odayaasha dhaqanka iyo Ergooyinkaba laga sugayo.
Odayaasha dhaqanka ayaa waqti yar waxaa laga sugayaa in ay deg deg ku qaybiyaan ergooyinka iyo xubnaha barlamaanka. Runtii maahan arrin sahalan inkasta oo ay khibrad u leeyihiin Odayaalku haddana wey adagtahay waqtigaan yar in ay wax ku qaybiyaan.
Ergooyinka, arrintoodu maahan mid dhib yar waana adkaan doontaa in ay sahal ku ansixiyaan caasimadda oo muran kataaganyahay in kasta oo madaxweynuhu sheegay in ay dhuusamareeb tahay haddana arrintaasi waa mid ergooyinka shirka u taalla. Waxaana warka madaxweynaha loo arkaa mid siyaasadeed ee maahan sharci la isku raacay sidaasi darteed marba haddii shaqada ergooyinka caasimadda doorashadeed lagu soo daray waa arrin mudan in go’aan laga gaaro, qiyaas ahaanna way adkaan doontaa in xal deg dega laga gaaro.
Tartanka Musharraxiinta madaxtinimada
Inkasta oo ay adagtahay in lasii sheego cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada goballada dhexe haddana waxaa cad in ilaa iyo hadda ragga safka hore taagan in uu hoggaaminayo Cabdikariin Xuseen Guuleed, loona badinayo in uu noqdo ninka koowaad ama labaad, waxaan laqiyaassi karin ilaa iyo hadda ninka ku xigsan doona Cabdikariin. Waxaa cad in Cabdi Qaybdiid oo rajo weyn kalahaa madaxtinimada in uu haatan saluugsan yahay sida wax u socdaan, waxaa uuna ku dhawaaqay in uu kalsoonidii kala noqday guddigii farsamada isaga oo ku dhawaaqay guddi kale arrintaasi oo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odawaa uu si buuxda gaashaanka ugu dhuftay isaga oo sheegay dad dano gaara leh in ay isku dayayaan in ay shirka carqaladeeyaan hasayeeshee aan laga yeeli doonin.
Dhanka kale murashaxa Axmed Macllin Fiqi ayaa lasheegayaa in uu ka mid yahay murashaxiinta sida weyn loo hadal hayo oo ololihiisu si buuxda uga muuqdo Cadaado. Maxamed Cilmi Afrax ayaa la isna lagu daray afarta musharrax ee ugu muhiimsan hasayeeshee maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa wixii ku soo kordha dhanka musharraxiinta.
Previous articleWasaaradda Ganacsiga oo Baareysa Tayada Badeecooyinka Soomaaliya Loo Soo Dhoofiyo
Next articleCadadkii 18aad ee Xaqiiqa Times